တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁၀၀% သဘာဝပျားဖယောင်းလက်လက်နှစ်ချောင်းဖယောင်းတိုင်ဖယောင်းတိုင်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Seawell
အနံ့ဆိုး Candle-4 မီးခိုးငွေ့မွှေးသောရနံ့ဖယောင်းတိုင်ဖယောင်းတိုင်လက်ဆောင် ...
မွှေးကြိုင်သောဖယောင်းတိုင် -၃ အနံ့အရသာရှိသောဖယောင်းတိုင် Soy Wax Travel Tin ...
မဏ္Pိုင်ဖယောင်းတိုင် -၁ အဖြူနှင့် Ivory Lavender ရနံ့များ ...
ပစ္စည်းများ: 100% beeseawx
အရွယ်အစား - ၆ လက်မ၊ ၈ လက်မ၊ ၁၀ လက်မ
အထုပ်: 1pc / ကျုံ့ထုပ်, 10wraps / pvc box ကို,
ရနံ့ - သဘာဝပျားရည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံမှကျွမ်းကျင်သောဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်စိတ်ကြိုက်ဖယောင်းတိုင်များကိုပြုလုပ်သည် taper ဖယောင်းတိုင်s, တိုင်ဖယောင်းတိုင်, ဖန်အိုးတလုံးဖယောင်းတိုင်, သံဖြူကွန်တိန်နာဖယောင်းတိုင်, စာလုံးပေါင်းဖယောင်းတိုင်, etc, ပစ္စည်းများ paraffin ဖယောင်း, ပဲပုပ်, အုန်းသီးဖယောင်း, ပျားဖယောင်းစသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။
၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော၊ ၎င်းတို့ကိုရေနံအခြေပြုမဟုတ်သောကြောင့်ကောင်းမွန်စွာချုံ့ပါကမီးခိုးအနည်းငယ်ဖြင့်အလွန်သန့်ရှင်းစွာမီးရှို့ပါ။ 100%ပျားဖယောင်းတိုင်ဖယောင်းတိုင်သဘာဝတွင်သဘာဝဓာတုပစ္စည်းများမရှိခြင်းနှင့်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၂။ ပျားရည်နှင့်ပန်းပျားရည်တို့ကသဘာဝရနံ့သဖွယ်ဖြစ်သောကြောင့်အလွန်အနံ့ရှိသည်။ ကာဗွန် - ကြားနေ။
၃။ အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားစွာထားပါ (အမှန်တကယ်သိသည့်ဖယောင်းများအားလုံးတွင်အမြင့်ဆုံး) ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြာရှည်စွာ (၂-၅ ဆ) လောင်ကျွမ်းသောအချိန်နှင့်အနည်းငယ်မျှယိုပါကအနည်းဆုံးယိုစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်ကသူတို့ပိုမိုမြင့်မားကုန်ကျစရိတ်ကိုထေမိ။
4. သန်စွမ်းတောက်ပလောင်ကျွမ်းပါ။ နေရောင်နှင့်တူညီသောအလင်းရောင်စဉ်၏သဘာဝအားဖြင့်တောက်ပသောအလင်းကိုထုတ်လွှတ်ပါ။ သူတို့သည်သဘာဝမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၅။ လေထုအရည်အသွေးကိုသန့်ရှင်းစေခြင်း၊ သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားသန်စွမ်းစေရန်အနှုတ်အိုင်ယွန်များထုတ်လွှတ်သည့်တစ်ခုတည်းသောဖယောင်းတိုင်။ သဘာဝအိုင်းယွန်းနီးယား!
ရှေ့သို့ ဇိမ်ခံ Elegance ရောင်စုံ Long Taper ဖယောင်းတိုင်
နောက်တစ်ခု: သဘာဝပျားဖယောင်းတိုင် votive ဖယောင်းတိုင်
၄ လက်မအမြင့် ၁၀၀% သဘာဝပျားဖယောင်းဖယောင်းတိုင်
လက်လှိမ့်ဖျားတိုင်မှတ် taper ဖယောင်းတိုင်
ပျားဖယောင်း tealight ဖယောင်းတိုင်ကိုလောင်ကျွမ်းသော6နာရီ
သဘာဝပျားဖယောင်းတိုင် votive ဖယောင်းတိုင်
taper ဖယောင်းတိုင်, ပျား votive ဖယောင်းတိုင်, ပျားဖယောင်းတိုင်ဖယောင်းတိုင်, ပျားဖောင်းဖယောင်းတိုင်, ပျားတိုင်ဖယောင်းတိုင်, votive ဖယောင်းတိုင်,